En Ndinike ixesha lokuphola Sithanda i-cinema nomculo, ke zezona zinto sijolise kuzo. Ukongeza, sijongana nazo zonke iintlobo zomzuzu kunye nee-eras zangaphambili, ukusuka kweyona cinema yomlo iklasikhi ukuya kwiifilimu zoopopayi zamva nje.
Kwibala lomculo, sithanda i-jazz, i-flamenco kunye nomculo wepunk. Uxube ntoni, huh? Oku kunokwenzeka kuphela ngenxa yethu Iqela labahleli, Ezincedisana ngokugqibeleleyo ukwenza iDame Ocio eyona ndawo ithetha kakhulu iSpanish kwezi zihloko.
Amakhonsathi kunye neminyhadala
IiReggaeton Umculo Umculo